Nin caan ah oo arooskiisa u raadinayo kaalmo boqolaal kun oo doolar ah | Baahin Media
Nin caan ah oo arooskiisa u raadinayo kaalmo boqolaal kun oo doolar ah
May 22, 2019 - jawaab
Majaajiliistaha caanka ah ee u dhashay dalka Kenya, Eric Omondi ayaa codsanaya in laga caawiyo kharashaadka ku baxayo arooskiisa oo uu ku qiyaasay ku dhawaad $800,000 oo dollarka Mareykanka ah.
Majaajiliistahan ayaa waxay wada socdaan gabar u dhalatay Talyaaniga oo lagu magacaabo Chantal Grazioli, wuxuuna doonayaan in madax uu ku casuumo xafladda arooskiisa.
“Arooskeyga ma ahaan arrin aniga ii gaar ah balse waa arrin caalami ah, marka qof Kenya u dhashay oo la aqal galaya gabar Talyaani ah iyo gabar Talyaani ah oo la aqalgaleyso Kenyan,” ayuu yiri Eric Omondi oo la hadlayay wargeyska The Star.
Waxaa uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in kharashaadka arooskiisa uu ku bixi doono ku dhawaad $800,000 dollar isla markaasna ka codsaday shacabka inay lacagta ka caawiyaan.
Kaftannada uu sameeyo waxaa qeyb ka ah Soomaalida oo horey uu bandhigyadiisa ku matalay qaabka ay u hadlaan iyo sida ay Islii ugu badan yihiin.
Omondi oo si weyn looga yaqaanno baraha bulshada ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in marka uu arooskiisa dhacayo diyaarad gaar ah u kireysan doono dalka Talyaaniga halkaas oo ay xafladda arooska ka dhici doonto.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in qorshaha uu ugu jiro in arooskiisa ay ka qeybgalaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya, jilaayaal caan ah iyo madax kale.
Jilaagan wuxuu inta badan qabtaan bandhigyo uu ku madadaaliyo taageerayaashiisa oo Soomaali ay ka mid yihiin, iyadoo dhacdooyinka taagan uu majaaliyoon ka sameeyo kuwaas oo uu soo geliyo baraha bulshada.